URudyard Kipling. Iminyaka eli-153 yokuzalwa kwakhe. Imibongo emibini | Uncwadi lwangoku
Iphelile 1865 xa weza ehlabathini Yosefu URudyard Kipling en bombay (EIndiya), omnye wabo babhali benza imbali kuncwadi ngoonobumba abakhulu. Ndithethile andenzanga nto Oku kubhaliwe yolungelelwaniso lwefilimu kwincwadi yakhe eyaziwa kakhulu, Incwadi yehlathi. Namhlanje, ukubhiyozela entsha Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe (Sele ineminyaka eli-153), ndiyakhumbula kwicala lakhe lesibongo kunye nemibongo yakhe emibini: eyaziwayo Si y Sukuncama, ukongeza kwezinye iivesi ezivela kuye Iimpawu zemfazwe. Ibiyi Umvuzo weNobel Zoncwadi ngo-1907.
U-Kipling, mhlawumbi owaziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe obalulekileyo wokubhala, wayesele ethathelwa ingqalelo ngumbongo wesizwe wase-Great Britain. Wabhala iincwadi ezintathu zemibongo: Iilwandle ezisixhenxe, Iibhaladi kwizisele zemikhosi y Izizwe ezihlanu. Owona mbongo wakhe ubalaseleyo, Si, yayiqukiwe kwingqokelela yemibongo Fairies kunye nezibonelelo, ka-1911. Ndongeza ezinye iivesi ezifakwe kwezakhe Iimpawu zemfazwe, iphefumlelwe yiMfazwe yeHlabathi yokuQala apho wafela khona unyana wakhe uJohn.
3 Iimpawu zemfazwe
ulahlekelwe yeyakho kwaye ngenxa yoko bayakugxeka,
ukuba ungalinda ungadinwa kukulinda,
okanye uxokiswe, sukuhlawula ngobuxoki,
okanye ukuthiywa, musa ukubeka intiyo,
kwaye -kodwa- ayikhangeleki intle kakhulu, okanye ulumke kakhulu.
Ukuba ungaphupha-kwaye ungenzi amaphupha utitshala wakho,
ukuba uyakwazi ukucinga - kwaye ungenzi izimvo zibe yinjongo yakho,
ukuba ungadibana noNqoba kunye neNtlekele
kwaye ubaphathe ngendlela enye aba faker babini;
ukuba ungayivuma inyani oyithethileyo
Ukhohliswe ngabaphangi abaqhatha izidenge.
Okanye jonga izinto ozibeka ebomini bakho, ezaphukileyo,
kwaye uhle phantsi kwaye uzakhe ngokutsha ngezixhobo ezindala.
Ukuba uyakwazi ukona konke uloyiso lwakho
kwaye ubungozi emngciphekweni wethamsanqa,
kwaye ungaze uthethe nantoni na malunga nelahlekileyo;
ukuba ungayihluza intliziyo yakho kunye nemithambo kunye neetoni
ukudlala ithuba lakho ixesha elide emva kokuba zichithwe.
Ke xhathisa xa ungenanto ishiyekileyo
ngaphandle kwe-Will ekuxelela: "Melana."
Ukuba uyakwazi ukuthetha nezihlwele kwaye ugcine ubuhle bakho,
okanye uhambe nookumkani kwaye ungalahlekelwa yingqondo,
ukuba iintshaba nabahlobo abakwazi ukukwenzakalisa,
ukuba ungazalisa lo mzuzu ungalibalekiyo
ngemizuzwana engamashumi amathandathu ehamba ngayo.
Ngowakho umhlaba, nako konke okukuwo;
Ngaphezu koko, uya kuba yindoda, nyana.
Xa izinto zihamba gwenxa ngamanye amaxesha,
xa ndikunika indlela yakho kuphela ukunyuka,
xa unentwana yokufumana kodwa unento eninzi yokuhlawula,
kwaye kufuneka uncume nokuba kufuneka ukhale,
xa iintlungu zikongamele kwaye ungasenakuhlupheka,
Phumla mhlawumbi kuya kufuneka kodwa ungaze unikezele.
Emva kwethunzi lokuthandabuza
sele isilivere kwaye imnyama,
uloyiso lunokuvela kakuhle,
hayi ukusilela owoyikayo,
kwaye akunakwenzeka ukuba ukungazi kwakho ucinge ukuba kufutshane kangakanani,
inokuba yinto elungileyo oyilangazelelayo kwaye ugwebe kude kangaka, ulwe,
Ewe, nokuba kunzima kangakanani ukubandezeleka emzabalazweni.
Xa yonke into imbi, kufuneka unyanzelise!
Ukuba kwidabi lokulwa likukhahlela phantsi,
ukuba yonke into esendleleni inyukile,
ukuba uncumo lwakho lwanelisekile,
ukuba kukho umsebenzi ogqithisileyo kunye nesivuno esibi,
ukuba ukuhamba kwakho kuchaswa ziidikes,
Zinike uxolo, kodwa unganikezeli!
«Kuba kobu bomi akukho nto igqibeleleyo,
uthathe ingqalelo yokuba: yonke into iyadlula, yonke into ifike nayo yonke into ibuye ».
Yonke imihla, nokuba akukho ndlebe ziphulaphulayo,
imithandazo yam yavuka.
Yonke imihla, nangona kungekho mlilo wehlayo,
Nangona ubumnyama abuzange buphele kum,
nangona engakhange ajongane nemikhosi emincinci,
Nangona oothixo bengakhange banike nasiphi na isipho, naphezu kwayo yonke into,
Ngaphandle kwayo yonke into, ndakhonza ooThixo.
Ukufa kwasekuqaleni kwakundithandile, ndisazi kakuhle ukuba andinakubamba
ulinde usuku nosuku. Ndishiye abaphathi bam beza
ukubetha ikhwelo emasimini, kwaye, emva kokuqinisekisa,
"Umgca wakho uza kuphela," utshilo, "kodwa okungenani ndiyigcinile eyakhe
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » URudyard Kipling. Iminyaka eli-153 yokuzalwa kwakhe. Imibongo emibini